Madiki henna maTatoo, echinguvana uye akanaka maitiro | Kunyora
ari henna nyora zvidiki hazvisi zvakawanda, kutaura zvazviri, echinyakare magadzirirwo anowanzo kuve akaomesesa uye azere neruzivoNekudaro, kana iwe uri kutsvaga, hazvigoneke kuti uwane zvimwe zvakangwara zvigadzirwa.
Muchikamu chino tichaona mashoma henna nyora diki uye isu tichataura nezve aya maitiro eatatu tattoo. Saka, ramba uchiverenga kana iwe uchifarira!
1 Diki henna maTatoo, magadzirirwo ekusarudza kubva
2 Iyo henna ine njodzi here?
Diki henna maTatoo, magadzirirwo ekusarudza kubva
Mukuwedzera kune izvo zvigadzirwa zvaunogona kuwana pane yekufambisa kweanenge chero mahombekombe (anosanganisira ma dolphin, shato, fairies, mwedzi, zuva, madhimoni madiki ... tsime, akajairika magadzirirwo), kune akati wandei mamwe echinyakare magadzirirwo aunogona kufunga nezvawo.
Ivo vane runako rukuru uye, kunyange hazvo yakati kurei, ivo zviri pachena zvakare zvakare kunoshamisa. Nzvimbo dzinoshandiswa zvakanyanya dhizaini idzi dziri pamaoko netsoka. Uye zvakare, kana iwe ukawana nyanzvi, ivo vanogona kukuita iwe wakasarudzika kana wakasununguka dhizaini, kana nekushandiswa kwesitampu.
Iyo henna ine njodzi here?
Inofanira kuyeukwa kuti, kana iyo henna isina kusanganiswa nezvimwe zvinowedzera, hapana njodzi kana uchiishandisa. Nekudaro, iwe unofanirwa kungwarira neinonzi nhema nhema henna, sezvo ichigona kunge iine zvinhu zvinogona kutipa isu zvakaoma, senge sirivheri nitrate kana kunyange chromium.
Kazhinji izvi zvinowedzerwa zvinoshandiswa chete kune dhayi rebvudzi, sezvo, rakaiswa paganda, zvinogona kukonzera kesi dzechirwere kana kuzvimba, pakati pevamwe. Saka, Kana iwe uchida kuve nechokwadi, yeuka kugadzirwa nyora chete nenyanzvi!
Isu tinoshuvira ichi chinyorwa pane zvidiki henna maTatoo uye njodzi yekushandisa nhema henna yave ichikubatsira iwe. Tiudze, wakambo tora tattoo nerudzi urwu rwe pigment? Zvakaitika sei? Rangarira kuti iwe unogona kutiudza zvese zvaunoda, iwe unofanirwa kutisiira isu mhinduro!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Tattoos » Body Art » Diki henna maTatoo, echinguvana uye akanaka maitiro
Mateki ekunyepera, mhando dzakasiyana